Iindaba-Ukusetyenziswa kwegalati efanelekileyo
Ukusetyenziswa kweglate efanelekileyo
Ipropyl gallate (PG), ekwabizwa ngokuba yipropyl gallate, inefomula yeC10H12O5. Ubunzima beemolekyuli ezingama-212.21. NjengamaTshayina "iMigangatho yezeMpilo yokuSebenzisa iZongezo zokutya" (GB2760-2011) ichaza: IPropyl gallate inokusetyenziswa kumafutha okutya, ukutya okuqhotsiweyo, iimveliso zentlanzi eyomileyo, iibhiskithi, ii-noodles ezikhawulezayo, irayisi ekhawulezileyo, amandongomane enkonkxiweyo, iimveliso zenyama ephilisiweyo, njl. Isixa sokusetyenziswa yi-0.1g / kg.
Iipropyl gallate Iipropati zekhemikhali Amachiza amhlophe afana nenaliti amhlophe okanye amhlophe ukuya kumthubi omdaka obumthubi obumdaka, ongenaburhabaxa, okrakra kancinane, onendawo enyibilikayo eyi-150 ℃. Kuzinzile ukufudumeza, kwaye kuyanceda ukubola xa kuvezwe ukukhanya. Imfusa okanye luhlaza ocacileyo xa ivezwe kwi-ion zethusi kunye ne-iron, kwaye iyi-hygroscopic. Iyanyibilika ngokulula emanzini ashushu, i-ethanol, i-propylene glycol, i-glycerin, i-oyile yecottonseed, isinqumelo, ioyile yamandongomane kunye ne-ether, kodwa ayinyibiliki kumanzi abandayo. I-pH ye-0.25% isisombululo samanzi malunga ne-5.5. Iigundane zinomlomo we-LD503800mg / kg kunye ne-ADI 0-1.4mg / kg (FAO / WHO, 1994).
Ipropyl gallate ikwayiarhente yokutya evunyelwe ukuba isetyenziswe eTshayina kwaye isetyenziswe ngokubanzi phesheya. IsiTshayina sichaza ukuba singasetyenziselwa amafutha atyiwayo, ukutya okuqhotsiweyo, ii-biscuits, ii-noodle ezikhawulezayo, irayisi ephekwe ngokukhawuleza, amandongomane enkonkxiweyo, iimveliso zentlanzi ezomileyo kunye neemveliso zenyama ephilisiweyo, kwaye inani lokusetyenziswa yi-0.1g / kg. Amandla e-PG kwilard anamandla ngakumbi kune-BHA okanye i-BHT. Xa ixutywe ne-BHA okanye i-BHT, isiphumo se-synergist siyongezwa.
I-PG ikwayiarhente enyibilikayo ngeoyile evunyelwe ukuba isetyenziswe e-China kwaye isetyenziswe ngokubanzi phesheya. Amandla e-PG kwilard anamandla kune-BHA okanye i-BHT. Xa ixutywe kunye ne-BHA kunye ne-BHT, i-synergist iyongezwa, kodwa iziphumo kwiimveliso zedosi azomelele njenge-BHA kunye ne-BHT. Ilizwe lam licacisa ukuba linokusetyenziselwa amafutha atyiwayo, ukutya okuqhotsiweyo, ii-biscuits, ii-noodle ezikhawulezayo, irayisi ephekwe ngokukhawuleza, amandongomane enkonkxiweyo, iimveliso zentlanzi ezomileyo kunye neemveliso zenyama ephilisiweyo, kwaye isixa sokusetyenziswa yi-0.1g / kg.
Iprylyl gallate kukutya kunye nesongezelelo sokondla. Isetyenziswa njenge-oxidant yomgodi kumanqatha, kwiiladi, njl., Inefuthe elomeleleyo, kodwa inengxaki yokufaka imibala. Umthamo ungaphantsi kwe-0.1g / kg. Xa isetyenziswa njengearhente yokondla, idosi * yi-100 ppm. Inokusetyenziswa kwizithambiso. Rat ngomlomo LD50 yi 3.8g / kg.
Ixesha Post: May-17-2021